SEA GAMES နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေးမိ ရေးမိသမျှ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » SEA GAMES နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေးမိ ရေးမိသမျှ…
SEA GAMES နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေးမိ ရေးမိသမျှ…
Posted by johnnydeer on Dec 26, 2013 in Think Different |9comments
Hip Hop ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက TB ဖြစ်လို့ သေသွားပြီး သူတအားချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ သေကွဲကွဲသွားလေသတဲ့….အားလုံးကတော့ စိတ်မကောင်းတဲ့ comment တွေရေးကြတာပေါ့….အဲ့ဒီအထဲက ကောမန့်လေးတစ်ခု သဘောကျလို့…
(((ဟာဗျာ ကြားရတာစိတ်မကောင်းဘူးဗျာ ဒါဆို သူမြန်မာဘော ရှုံးတာမသိလိုက်ဘူးပေါ့ အရှုံးထဲက အမြတ်ပါပဲဗျာ)))
ဘာဘာ ဘာမှလဲ ဆိုင်ဝူး….ပြုံးတောင် ပြုံးမိလိုက်သေး….
မြန်မာတွေ လက်မှတ်တိုးရ…တန်းစီရ…ငွေကုန်ကြေးကျတွေများရ…ဒေါသထွက်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ ဝေးသွားတာပေါ့လေ….. (အကောင်းမြင်တတ်သူ)
ခွေးသားတွေ တခါထဲ မြေမျိုပြီး သေသွားရမှာ… (အဆိုးမြင်တတ်သူ)
ဟီး…မြန်မာအသင်း ရှုံးသွားပြီ….ရွှတ် (မျက်ရည်လွယ်သူ)
ကိုယ့်ကောင်တွေကိုက အသုံးမကျတာပါဗျာ…. (အရှိတရား မြင်တတ်သူ)
နံပတ် 7…ပတ်ဆောင်ဟွာ…ဗီယက်နမ်ဒိုင်…. ကြောင့် (ရမယ်ရှာတတ်သောသူ)
ဒေါ်စုကြောင့် ရှုံးရတာ….သူနိုင်ငံခြားချည်းပဲ သွားနေလို့…. (လော်ဘီ ခွေးတစ်အုပ်)
ကြက်ဆူပင် စိုက်လိုက်လို့ ဘောသမားတွေ ဦးနှောက်မရှိတော့တာပါ… ယတြာ ချေရပါမယ်… (ဘိုးတော်)
ဗမာရှောင် အိုတောင် မဆင်းရဲတဲ့…. (ဘော့လုံးပွဲ နိုင်သောသူ)
ကျွန်တော် အရင်တုန်းက ပိုစ့်တစ်ခု ရေးဖူးပါတယ်….
မြန်မာအသင်းက တစ်နိုင်ငံလုံး ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးနေတာပါလို့….တချက်ထဲ လိုက်နာရမှာ…သူ့ကိုသာ ရှောင်ပြီးလောင်း…တဲ့…
တားတား မတိလို့ မေးပါရစေနော်…
ဆီးဂိမ်းမှာ တအားလူပြောများတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်…နှစ်ပေါင်း လေးဆယ်ကျော်ကြာမှ ပြန်လည်ကျင်းပသည့်ပွဲ ဆိုတာ ခဏခဏ ပြောကြတယ်…တားတားတို့ နိုင်ငံက အဲ့ဒီ နှစ်လေးဆယ်ကျော် ဘာလို့ ဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲကြီးကို မလုပ်တာလဲဟင်…
တားတားက နည်းနည်းခပ်ပိန်းပိန်းမို့လို့ မတိလို့မေးတာနော်…
စစ်ရေးအမြင်ရှိစရာ လိုသလား မလိုသလားတော့ မသိ…
ဒီလို ပွဲကြီးကိုလုပ်တဲ့ အိမ်ရှင်ဆိုတာ ငွေသောက်သောက်လဲ ကုန်ပါတယ်…
အားကစားသမားတွေထားဖို့ဆိုပြီး အထပ်မြင့်ကွန်ဒိုကြီးတွေ ဆောက်လိုက်တယ်တဲ့…
ပွဲကာလအတွင်းမှာ အားကစားသမားတွေကို ထားလိုက်တယ်တဲ့…
ခြင်မကိုက်ပဲ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် နေရတော့ နိုင်ငံဂုဏ်တက်တာပေါ့…
အားကစားပွဲလဲ ပြီးရော အဲ့ဒီ ကွန်ဒိုတွေ ရောင်းစားလိုက်တယ်….တဲ့…
အားကစားရွာ ဆောက်တာမကုန်တဲ့အပြင် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေပြန်ရောင်းရတဲ့အတွက် မရှုံးတဲ့အပြင် မြတ်တောင် မြတ်သေးတယ်တဲ့…တိုင်းပြည်က…))
သူများတိုင်းပြည်မှာ ပြောပါတယ်…အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်လို့ ကြားဖူးတာပါ…
တို့တိုင်းပြည်ကော ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ ဟင်င်င်င်င်….
SEA Games နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြိုတင် ရွှေတံဆိပ် ဆိုပြီး ကြိုတင်မဲနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြီး ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့တော့ အဆိုးမြင်လိုက်တာလို့ တချို့က ထင်ချင်လည်း ထင်ကြမယ်။ အချက်အလက် မရှိဘဲ အရမ်း အဆိုးမြင်တယ် ဖြစ်မှာစိုးတာရော၊ reality ကို တွေးကြည့်စေချင်တာရောကြောင့် သိသလောက်ကြားသလောက် ရေးလိုက်ပါဦးမယ်။
ပြိုင်ပွဲမှာ ခြင်းလုံး အားကစားနည်း ထည့်တာတွေ၊ ရိုးရာ စစ်တုရင်ထည့်တာတွေကို ကျွန်တော် အဆိုးမမြင်ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါတွေက ပြိုင်ပွဲဝင် အနည်းဆုံး ငါးနိုင်ငံက ဝင်ပြိုင်မှ ထည့်ပြီးကျင်းပခွင့် ရတာဆိုတော့ တခြားနိုင်ငံတွေ စိတ်ဝင်စားအောင် စည်းရုံးရ၊ သင်ပြရနဲ့မို့ အားထုတ်မှုတွေ ပါပါတယ်။ ညစ်တယ်လို့လည်း ပြောလို့ မရဘူး။ ဘောင်လဲဝင်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်နိုင်ငံက အားကစားနည်း တစ်ခုကို လူလည်း ပိုသိသွားတာပေါ့။ အဲဒါမျိုးကိုတော့ သုံးခွင့်ရှိတဲ့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံ အခွင့်အရေးအဖြစ် သဘောထားပါတယ်။
အားနည်းချက်တွေထဲမှာ သိပ်ပြီး ရုပ်မပျက်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ အချက်တွေကို အရင်ပြောပါမယ်။
ပွဲမလုပ်ခင်ကတည်းက အားနည်းတဲ့ အချက်ကို စပြီး ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့၊ အိုလံပစ်အားကစားနည်း အများအပြားကို ဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကဆိုရင် အားကစားသမား အရေအတွက်ကို လျှော့ပြီး လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၄ နှစ်အတွင်းမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ်းတွေကို ဖိလစ်ပိုင်က လွှတ်ခဲ့တဲ့ အားကစား သမားအရေအတွက်တွေထဲမှာ အခုတခေါက်က အနည်းဆုံး အရေအတွက်လို့ ကမ္ဘောဒီးယား သတင်းစာ တစ်စောင်က ဆိုပါတယ်။ Wikipedia မှာလည်း ပါပါတယ်။
ပွဲစဉ်အချိန်ဇယားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း၊ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ဖို့ ပွဲစဉ်အချိန်ဇယားတွေကို အခြေအနေအရ ပြောင်းရဦးမယ် ဆိုပြီးပြောခဲ့တာကိုလည်း တဆင့် သိခဲ့ရပါတယ်။ (ဒါက တခြား အိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေလည်း လုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်)
လှေပြိုင်ပွဲတွေကို လုပ်ခဲ့တဲ့ ငလိုက်ဆည်ရဲ့ လေကြောင်းအခြေအနေတွေက တခြားနေရာနဲ့ မတူဘူး၊ ထူးခြားတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အားသာချက် ရှိတယ်ဆိုတာ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အဲဒီမှာ လနဲ့ချီပြီး လေ့ကျင့်တယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေကိုတော့ ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် နှစ်ရက်ပဲ ကြိုလေ့ကျင့်ခွင့် ပေးပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားက စောစောကြိုလာပြီး ငလိုက်ဆည်မှာ လေ့ကျင့်ချင်တယ်လို့ ခွင့်တောင်းတဲ့အခါ ကျတော့ ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ တခြားအားကစားနည်းတွေမှာလည်း တခြားနိုင်ငံတွေ လေ့ကျင့်ဖို့ နေရာကို အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ပေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိပါတယ်။
ဒါတွေက ပွဲမစခင်မှာ လုပ်ခဲ့တာတွေ။
ကိုယ့်ရိုးရာ အားကစားနည်းတွေကို ထည့်ပြိုင်ပြီး ရွှေတံဆိပ်ယူတာကို အကောင်းမြင်ပေးလို့ ရပေမဲ့ တခြားအားကစားနည်းတွေမှာ ညစ်တာကိုတော့ စိတ်ပျက်မိပါတယ်။
အခုအောက်မှာ ဖော်ပြမယ့်ဟာက အားကစားပွဲ သွားကြည့်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက် message ပို့ထားတဲ့ဟာပါ။ သူငယ်ချင်းပြောတာကို လူနာမည်တွေ၊ အဖွဲ့နာမည်တွေ ပါရင်မကောင်းလို့ အဲဒီနေရာတွေမှာ ဖြတ်ထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့နေရာမှာ သတ်ပုံကအစ မပြင်ဘဲ သူငယ်ချင်းရေးခဲ့တဲ့ မူရင်းအတိုင်း ထားထားပါတယ်။
“ကိုကောင်းရေ ကျနော်တော့ Sea games ကြည့်ပြီး နေပြည်တော်က ပြန်ခဲ့ပြီ။ ပိတ်ပွဲတော့ မကြည့်တော့ဘူး။ တီဗွီကလည်း မကြည့်တော့ဘူး။ Feel မလာတော့ဘူး။ ဘယ်သူ့ရင်ဖွင့်ရမယ်မှန်းလည်း မသိဘူး။ သိပ်လည်း မပြောချင်ဘူးဗျာ။ မကောင်းမြင်တယ်ဘဲဖြစ်ဦးမယ်။”
“အမြင်မတော်တာတွေ။ မတော်တရော်လုပ်တာတွေအများကြီးဘဲ။ မစခင်ကတည်းက အနံ့ထွက်လာတာဗျာ။ ကျနော့်ဆရာပြောပြတာ။ ကျနော်တို့က (……) အသင်း [ကရာတေးအသင်းတစ်ခု] ဆိုပြီးရှိတယ်ဗျာ။ ( ) အဖွဲ့ပေါ့။ ကျနော်အစက ဆရာတို့နဲ့ (….) အဖွဲ့နဲ့အတူတူ နေပြည်တော်လိုက်ပြီး Karate ကြည့်မလို့။ နောက်သူငယ်ချင်းရဟန်းခံနဲ့ကြုံတာနဲ့မလိုက်ဖြစ်ဘူး။ Karate လွဲသွားတယ်။”
“SEA games တွေမစခင်မှာ သတင်းထွက်လာတယ်။ (………………) အဖွဲ့တွေ ဘက်ကပါပဲ။ ဒိုင်တွေကို ငွေပုံပေးပြီး မနိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပြောတယ်တဲ့။ ဒိုင်တွေကပြောတယ်။ အင်ဒိုအသင်းက ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပါရင်ပါလာမယ်။ ကိုင်တဲ့လူကလည်း Manabu Murakami sensei (ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Shotokan Karate အဖွဲ့ရဲ့ technical director) လို့လဲကြားတယ်ပေါ့။ ဒါတကယ်ဆိုရင်တော့ အနိုင်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးတဲ့။ နောက်တော့ Murakami sensei လည်းမဟုတ်။ ချန်ပီယံလည်းမပါ ထင်ပါရဲ့”
“ဒါပေမယ့် မပြီးသေးဘူး။ မလိုက်ဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မြန်မာအမျိုးသမီး ခတ (Kata/form) အသင်းရွှေရသွားတယ်ပြောတယ်။ ၀မ်းသာတာပေါ့ဗျာ။ Karate မှာတစ်ခါမှာမှရွှေမရဘူးတာ။ နောက် တို့မြန်မာ Karate အဆင့်မြင့်လာပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပျော်တာကြာကြာမခံပါဘူး။ Sea games သတင်း online မှာရှာကြည့်တာ ဗီယက်နမ်နဲ့ပြဿနာတက်တယ် အဲ့ကိစ္စ။ မြန်မာက အရင်ပြိုင်တယ်။ နောက်ဗီယက်နမ်ကပြိုင်တယ်။ ဗီယက်နမ်မပြိုင်ခင်ကတည်းက စာရွက်ပေါ်မှာ မြန်မာကနိုင်ပြီးသွားပြီ။ ဗီယက်နမ်အသင်းက ပိုကောင်းနေတယ်။ ဒိုင်တွေတစ်ယောက် ရွှေငါးကျပ်သားဆိုလား သုံးကျပ်သားဆိုလားနဲ့ ငွေသိန်းချီပေးထားတယ်။ ဗီယက်နမ်ကဒါတွေဘယ်လိုသိသွားတယ်ရယ် မသိဘူး။ Complain တက်ရော။ အဲ့ဒီမှာ ဒိုင်တွေက တောင်းပန်ပြီး ရွှေတံဆိပ်ကတော့ ပေးလိုက်ပြီးပြီ မရတော့ဘူး။ [မြန်မာကို] ပထမတော့ပေးပါ့မယ်ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်တဲ့။ ဗီယက်နမ် media တွေမှာ “ရွှေတံဆိပ်ခိုးမှု” ဆိုပြီးရေးတယ်တဲ့။ Wiki က 2013 Sea Games page မှာတောင်ပါလာတယ်။ ရှက်လိုက်တာဗျာ”
“ဒါနဲ့ ဟိုရောက်သွားတော့ Karate မကြည့်ရ၊ ဖအေတူမအေကွဲ Taekwondo သွားကြည့်တယ်။ ကျနော်ရယ်၊ ကျနော့်သူငယ်ချင်းရယ်။ သူကတော့ သိုင်းသမားမဟုတ်ဘူး။ ဒီတိုင်းလိုက်ကြည့်တာ။ Taekwondo form တွေက Karate နဲ့သိပ်မကွာလှဘူး။ အခြေခံအယူအဆ တူတူဘဲ။ Karate သမားကြည့်လည်းနားလည်တယ်။ အဲ့မှာပြိုင်ကြတော့ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ဗီယက်နမ်က တော်တော်ကိုကောင်းတယ်။ MRTV က ကျနော့်ကို လာဗျူးသေးတယ်။ ပြောလိုက်တယ် ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဗီယက်နမ်က တော်တော်ကောင်းတယ်လို့။ မြန်မာကစားသမားတွေ အားပိုထည့် မာန်ပိုထည့်သင့်တယ်လို့။ ဗီယက်နမ်က ၈ မှတ်ကျော်နဲ့ဦးဆောင်နေတယ်။ မြန်မာက ကစားသွားတာသိပ်မစွံဘူး။ နှစ်ခါလောက်တောင်ယိုင်သွားတယ်။ သူငယ်ချင်းနားမလည်တဲ့လူကတောင် ပြောတယ်။ သွားပြီတဲ့။ တကယ်လည်း အမှတ်ပေးရော လားလား။ ၈မှတ်ခွဲလောက်နဲ့အပြတ်အသက်ပထမ ဖြစ်သွားရော။ သူငယ်ချင်းကပြောတယ်။ ညစ်ချက်က ကမ်းကုန်တဲ့”
“နောက် မွေလက်ဝှေ့။ မလေးက ကောင်က ထိုးတာ၊ မြန်မာဘက်က ဘယ်သူလဲမသိဘူး၊ ခဏခဏ ဖင်ထိုင်ရက်လဲတာ။ ပထမနှစ်ချီမှာ အလူးအလဲခံနေရတာ။ Commentator တောင်ပြောတယ်။ ဒီလိုဆိုမလွယ်ဘူးတဲ့။ တတိယအချီမှာလည်း ထိုးနိုင်တယ်ဘဲရှိတာ။ ဒါပေမယ့် အနိုင်ပေးလိုက်တော့ မြန်မာ။ အမေကတောင် ပြောတယ်။ ငါတောင်သိတယ်တဲ့”
“ကျနော်ဖြင့်သူတို့အစားရှက်လိုက်တာဗျာ။ မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရတဲ့ ကြေးတံဆိပ်က အဲ့ဒီ underhand method တွေနဲ့ရတဲ့ရွှေတံဆိပ်တွေထက်အများကြီး တန်ဖိုးရှိတယ်”
False confidence တွေပေးလိုက်တာနဲ့တူတူဘဲ။”
အဲဒါက သူငယ်ချင်း ပြောပြခဲ့တာပါ။ သူငယ်ချင်း ပြောပြတဲ့ ကရာတေးပွဲ အကြောင်းအရာက Wikipedia မှာလည်း ပါသွားပါပြီ။ Wikipedia ဆိုတာ လူတိုင်းဝင်ရေးလို့ ရတယ်ဆိုပေမဲ့ သတင်းတခုခုအပေါ်၊ စာအုပ်တအုပ်အုပ်အပေါ် ကိုးကားပြီး ရေးကြရတာပါ။ အခု ပါသွားတဲ့ဟာက ဗီယက်နမ် သတင်းစာကို အခြေခံပြီး ရေးထားတာပါ။ Wiki မှာရေးထားတာက ဒီလိုပါ။ “In the kata team event for women, the Vietnamese team has protested the decision of the jurors, which gave the gold medal to the host team (Myamnar). Subsequently, the juror committee had to haveameeting and admitted their mistakes. They released an apology to Vietnamese women kata team for their faults but the decision of juror could not be changed. Vietnamese media called this incident asa“gold medal robbery”, which regularly occurs within SEA Games.”
လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲမှာလည်း မြန်မာက ရွှေတံဆိပ် ရသွားတဲ့ အားကစားသမားတယောက် ပြိုင်ပွဲမှာ ခိုးခိုးပြီး ပြေးတယ်လို့ ဗီယက်နမ်တွေ စွပ်စွဲထားတာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ စွပ်စွဲချက် မှန်မမှန်တော့ မသိပါ။ ဂျူဒိုတို့၊ ပန်ကြပ်ဆီလပ်တို့နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ညစ်တာတွေလည်း ဝီကီက “Controversial Decision” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ဟာတွေက controversial လို့သာ ပြောရတယ် တကယ်က ငြင်းစရာတောင် မလိုဘဲ မတရားမှန်း သိသာနေတဲ့ဟာမျိုးတွေ။
ဘောလုံးပွဲမှာ လူကျွံမကျွံတို့ ဂိုးစည်းကျော်မကျော်တို့လိုဟာတွက အငြင်းပွါးစရာတွေ ဆိုတာကိုက လက်ခံတယ်။ Premier League လို ပွဲတွေမှာလည်း ခဏခဏ ဖြစ်တာကိုး။ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်း မမျှမတ ခံစားလိုက်ရတာကို လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာသွင်းလိုက်တဲ့ ဂိုးပုံစံမျိုး Premier League မှာ ဂိုးရတဲ့ပွဲတွေရော၊ မရတဲ့ ပွဲတွေရော အများကြီး၊ ထိုင်းသွင်းသွားတာကိုလည်း အဲလိုပဲ။ အငြင်းပွါးစရာ လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဘလိုင်းကြီး ဘက်လိုက်တာ လို့ ကျိန်းသေပေါက် သွားပြောလို့ မရဘူး။ တမင် လုပ်တာ ဟုတ်ချင်လည်း ဟုတ်မယ်။ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မယ်။ အဲဒါမျိုးက တကယ်ဘောလုံးအကြောင်း သိတဲ့သူတွေတောင် စလိုးမိုးရှင်းနဲ့ ပြန်ပြတာကို ကြည့်ပြီး ဂိုးသမားရဲ့ မြင်ကွင်းကို ပိတ်ခြင်း ရှိမရှိ အငြင်းပွါးနေကြရသေးတာ။ အဖြေတန်းထွက်မလာဘူး။ ကွင်းထဲမှာ လျှပ်တပြက် ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ ဒိုင်အတွက်ဆို ပိုပြီး မှားနိုင်တယ်လေ။ ဒီတော့ အဲဒါမျိုးကျတော့ တကယ့် controversial ပါ။ သေချာမမြင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဂိုးစည်းထဲကနေ ပုတ်ထုတ်တဲ့ အလုံးကို ဂိုးပေးလိုက်သေးတယ် မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ဘာပဲပြောပြော အမျိုးသမီးဘောလုံးမှာ မြန်မာဘက်က မမျှမတ ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတာတော့ လက်ခံတယ်။
တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ကစားသမား တော်တော်များများက နိုင်လိုဇောနဲ့ ညစ်လေ့ ရှိကြပေမဲ့ ဒိုင်တို့၊ ပွဲစီစဉ်ကြီးကြပ်သူတို့ ကတော့ ကစားသမားမှ မဟုတ်တာ၊ ညစ်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ဒိုင်ဆိုတာကတော့ တတ်နိုင်သမျှ မျှမျှတတ ဖြစ်စေဖို့ ထားတာမို့ professional ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကြုံလို့ပြောရရင် နိုင်ငံတကာ အားကစားမှာ မျိုးချစ်စိတ်ကိုချည်း နေရာတကာမှာ ရှေ့တန်းတင်လို့ မရပါဘူး။ မြန်မာအသင်းရဲ့ Petanque အသင်းတို့၊ BMX ပြိုင်ပွဲ အသင်းတို့ရဲ့ နည်းပြတွေဆို ထိုင်းတွေပါ။ မြန်မာ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲအသင်းရဲ့ နည်းပြဆို မလေးရှားပါ။ ထိုင်းနည်းပြ ကိုင်တဲ့ မြန်မာ Petanque အသင်းက ထိုင်းနဲ့လည်း ပြိုင်ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းပြတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူကိုင်တွယ်တဲ့ မြန်မာအသင်း အနိုင်ရရေးကိုပဲ ဦးစားပေးရမှာပါ။ သူ့ကို သစ္စာဖောက်လို့ သွားပြောလို့ မရပါဘူး။ သူကိုင်တဲ့ အသင်းကို သစ္စာဖောက်မှသာ သစ္စာဖောက်လို့ ပြောရမှာပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံက နည်းပြတွေ အဆင့်မြင့်လာပြီး ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကို သွားနည်းပြတဲ့အခါ သဘောထားကြီးအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံရှုံးတိုင်း တစ်ဘက်သားကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းကြတာကို စိတ်ကုန်လှပါပြီ။ အားကစားပြိုင်ပွဲဆိုတာက နိုင်ငံစုံ ကိစ္စ တစ်ခုပါ။
အခုရလာတဲ့ အောင်မြင်မှု အစစ်အမှန် ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ်းက အခြေအနေကို ပြန်ကြည့်ရင်လည်း သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက မြန်မာက ရွှေတံဆိပ် စုစုပေါင်း ၁၆ ခုနဲ့ အဆင့် ၇ ပါ။ တိုးတက်လာတာလို့ ဆင်ခြေပေးရင်လည်း ရပေမဲ့ တိုးတက်လာတာ မဟုတ်ဘဲ ဘက်လိုက်မှုကြောင့် ဆိုတာကို အပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေက သက်သေခံနေပါတယ်။
အမြင်အမျိုးမျိုးတော့ ရှိမှာပါ။ The Voice မှာပါတဲ့ နဒီရဲရင့် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် ရေးထားတဲ့ဟာမှာလည်း သဘောမတူနိုင်တာ ရှိပါတယ်။ သူမူရင်း ဆိုလိုချင်တဲ့….ဆီးဂိမ်းကို အကြောင်းပြုပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွါး ရှာသွားသူတွေ ရှိတယ် ဆိုတာကို သဘောတူပေမဲ့ တစ်ချက်ကိုတော့ သဘောမတူပါဘူး။ သူရေးထားတာက “သက်ဆိုင်ရာ အားကစားဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ရွှေ ၁၀၀ ရရှိရေး ရည်မှန်း ခဲ့ပေမယ့် မပြည့်မီခဲ့ပါဘူး။ တချို့သော သေချာပေါက် မျှော်မှန်းထားတဲ့ ရွှေတံဆိပ်တွေ လက်လွတ်ခဲ့ရသလို တချို့ပွဲတွေဟာ ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကြောင့် နစ်နာခဲ့ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ Content Games တွေလို ကစားပွဲတွေမှာ မြန်မာဟာ ရသင့်တဲ့ အိမ်ရှင် အခွင့်အရေးတွေကို မရခဲ့ပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ဆီးဂိမ်းရဲ့ Control Panel မှာ ဆုတံဆိပ်ခွဲတမ်း ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒိုင် အဆုံးအဖြတ်ပေါ်မှာ လုံးဝမှီခိုနေတဲ့ ဝူရှူးတို့၊ အလေးမတို့၊ ကာယဗလမောင် ပြိုင်ပွဲတို့၊ လက်ဝှေ့တို့လို အားကစား ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အိမ်ရှင် မြန်မာဟာ ဒိုင်တွေရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။”
ကျနော်ထောက်ပြချင်တာက အလေးမ အားကစားနည်းဆိုတာက ဒိုင်က ညစ်လို့ ရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူရေးသွားတဲ့ “ဒိုင် အဆုံးအဖြတ်ပေါ်မှာ လုံးဝမှီခိုနေတယ်” ဆိုတာ မှားနေတယ်။ အလေးမမှာ ထိုင်းက အားကစား သမားတချို့က အရှေ့တောင်အာရှ စံချိန်သစ်တွေတင်ပြီး နိုင်သွားတာပါ။ မနိုင်တဲ့ အလေးပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒိုင်ကဆုံးဖြတ်ရတာ မဟုတ်ပါ။ ထိုင်းအားကစားသမား တချို့ဟာ Snatch lift တွေမှာရော၊ Clean and Jerk lift တွေမှာရော အရှေ့တောင်အာရှ စံချိန်သစ်တွေ တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒိုင် အမှတ်ပေါ် ပိုပြီးမှီခိုရတဲ့ “သရုပ်ပြ” အားကစားနည်း အများစုမှာတော့ မြန်မာက နိုင်သွားတာ အထင်အရှားပါပဲ။
ဆီးဂိမ်း အိမ်ရှင်နိုင်ငံတိုင်းမှာ အဲလိုတွေ “အများကြီး” ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေရဲ့ အားကစားအဆင့်အတန်း အာရှအဆင့်ကို ရောက်လာဖို့ တော်တော်ရုန်းကန်ရဦးမှာပါ။ သူများနိုင်ငံမှာ လုပ်တယ်ဆိုရင်တောင် အဲလိုလုပ်ခြင်းက အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလို အပေါ်ယံ အတုအယောင်တွေကို ကြည့်ပြီး ဂုဏ်ယူနေတာဆိုရင်တော့ ပိုပြီးဆိုးပါသေးတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံတွေကပဲ လုပ်လုပ် လိမ်တာက လိမ်တာပါပဲ။
ကျနော် အခုရေးတာက ဗမာတွေ အတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတာပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတွေ လက်တွေ့အဖြစ်မှန် ကို သဘောပေါက်စေချင်ရုံ သက်သက်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို မီဒီယာတွေမှာတော့ အနည်းနဲ့ အများ ပွပြီးသားတွေပါ။ သိသလောက် လင့်ခ်လေးတွေ ပေးချင်ပါတယ်။
လင့်တွေပါတဲ့ ကော်မန့်မို့ မော်ဒရေးရှင်း မိပြီ။
All comments မှာကြည့်မှ မြင်ရမှာ။
နာ့ ကော်မန့်တစ်ခု မောဒလေးချင်း မိနေတာ။
လင်တွေ အများကြီး… အဲလေ လင့်တွေ အများဂျီးမို့ ထင်ဒယ်..
မြန်တျန့်ပွဲအတွက် တလုပ်ကျီးက တဝက်ခံဒယ်ဆိုလား… ကုန်ပေဦးတော့မည် ကျန်နေသေးတဲ့ ရိုးမတောဒွေ….
အင်းထင်တော့ထင်သား အဲဒါဒိုင်ကမြန်မာဖက်ကမျက်နှာလိုက်တယ် ပင်းတယ်ပြောမိလို့ ကိုယ်ကပဲအဆိုး မြင်သမားဖြစ်သွားသေးတယ်။ နင်ကနေရာတကာအကောင်းကိုမမြင်ဘူးတဲ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ လုပ်တာဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းဘာတဲ့။ ယူနိုင်ဘူးလို့ အရင်တုန်းက ရွှေ ၁၂ ခုလောက်ပဲရပြီးအခုရွှေ ၈၀ ကျော်ရ တာအနိုင်ကျင့်တာရှက်တယ်လို့။ မျက်ကန်းမျိုးချစ်များစိတ်ဆိုးတော်မူကုန်ပါတယ်။
တို့တော့ သူများအမြင်တွေပဲ ကြည့်နေမိတယ်
ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမမြင်တတ်သလောက်ပဲမို့ 
တားတား ပို့စ်က တိုတိုလေး..ဖတ်လို့လဲ ကောင်းဖူး…အောက်က ကောမန့်တွေကျမှ တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းသွားတော့တယ်…ကျေးဇူးကမ္ဘာ…
ဘိုင်သေ ပြိုင်ပွဲတွေကျ နိုင်ပေမယ့် တကယ့် အိုလံပစ်ဂိမ်းတွေကျ စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပါပဲ…ပြောချင်တော့ပါဘူး…ရင်လေးတယ်…
ခိုးချပြီး ခြောက်ဘာသာဂုဏ်ထူးထွက်သလိုပါပဲ…ပျော်ရမှာလား..ကိုယ့်လိပ်ပြာကို ရှက်ရမှာလား…ပြောချင်တော့ပါဘူး…